Talooyin ku saabsan inaanan ku xanuunsan markabka safarka oo aad ugu raaxaysato si buuxda | Maraakiibta Absolut
Talooyin ku saabsan inaanad ku xanuunsan markab safar oo aad ugu raaxaysato si buuxda
Ana Lopez | | Talooyin, General
Qofna ma jecla inuu xanuunsado oo yaraado markaan fasaxa ku jirno, sidaa darteed Absolut Cruises Waxaan dooneynaa inaan ku siino xoogaa talo iyo tusaalooyin ah si aad isugu daydo inaad ka fogaato inaad yeelato dhibaato caafimaad oo qariib ah markabka saaran markabka. Si kastaba xaalku ha ahaadee, haddii aad dareento caafimaad darro ama jirro, waa inaad ogaataa in doonyaha oo dhami ay leeyihiin dhakhaatiir iyo shaqaale caafimaad oo kula talin doona oo ku talin doona waxaad samayn lahayd.
Talada koowaad waxaan ku talinaynaa inaad shandadaada ku sidato kabadhkaaga dawada. Dhammaanteen waan wada naqaan waxa inta badan na haya iyo dawooyinka u fiican xanuunkaas ugxan -sidaha aan la rabin ama qabowga. Daawooyinka saarnaa way ka qaalisan yihiin sidii caadiga ahayd, marka lagu daro, haa ama haa, dhakhtarka saarnaa waa inuu qoro, markaa waa inaad sidoo kale bixisaa la -talinta.
Waxaan kugula talineynaa inaad ku darto golahaaga daawada dhibcaha indhaha, ka-hortagga bararka, xannuun-joojiyaha, boomaato kuuskuus ama murqo xanuun iyo daawooyinka xanuunka dhaqdhaqaaqa iyo dhibaatooyinka dheefshiidka. Kuwani waa shilalka ugu badan ama "jirrooyinka" ka dhaca maraakiibta dalxiiska.
1 Talooyin si aad isaga ilaaliso qabowga iyo istaroogga kulaylka
2 Si looga fogaado lallabbo iyo dawakh
3 Si looga fogaado "dhibaatooyinka mindhicirka"
Talooyin si aad isaga ilaaliso qabowga iyo istaroogga kulaylka
Rumayso ama ha rumaysan, hargab sanka iyo madaxa ka buuxsamay ayaa noqon kara mid aan raaxo lahayn oo kaa tagi kara inaad dareento wax aan jirin. Safarada xagaaga ee isbedelka heerkulka Inta u dhaxaysa gudaha iyo qoriga doontu waxay noqon kartaa mid xad dhaaf ah sababtuna waa qaboojiyaha, sidaa darteed mar walba qaado shawl ama kaarboon. Qolkaaga dhexdiisa, ha ka xishoon inaad codsato buste ama u hagaajiso qaboojiyaha heerkulkaaga, kaasoo sida caadiga ah xoog badan yahay.
Waxaan ku talinaynaa taas ha joogin barkadda marka qorraxdu dhacdo, ama haddii ay tahay mid aad u dabayl badan. Waxa kale oo lagugula talinayaa inaad beddesho dharkaaga dabbaasha qoyan ama timahaaga qallajiso.
Dhinaca kale, waxaad qabsan kartaa qorrax -dhac yar oo kaa xanaajisa maalmo inta lagu jiro fasaxaaga. Mararka qaarkood marka aan fasax ku jirno, waxaan helnaa nasasho aan ilaawno qaar ka mid ah su'aalaha aasaasiga ah, sida ku noqoshada mari kareemka qorraxda, ugu yaraan labadii saacadoodba mar, qorraxda ha ku dheeraan, madaxa daboolo koofiyad, iska ilaali muraayadaha qorraxda ... waxyaabo fudud oo shaki la'aan naga caawin doona inaanan xanuunsan
Si looga fogaado lallabbo iyo dawakh
Haddii aad tahay qof u nugul dawakhaad, ama aadan ogayn laakiin aad dareento dawakh qaar ka mid ah cuntooyinka si ay kuu caawiyaan ka hor intaadan isku dayin kiniinnada ka hortagga badaha, laakiin haddii loo baahdo, ha ka waaban inaad isticmaasho. Runtii waa wax ku ool. Qaar ka mid ah cuntooyinkaan aan ka hadlayey waa tufaax cagaaran, tusaale ahaan macmacaanka sinjibiisha, run ahaantii, shirkado badan oo maraakiibtu waxay bixiyaan macmacaankaas casho kadib. Sida xeelad degdeg ah, haddii aad dareento lalabbo, diirka liinta ka soo ur.
Si looga fogaado "dhibaatooyinka mindhicirka"
Waxaan hore ugu hadalnay boostada oo keliya oo ku saabsan norovirus, ama calool -caloosha oo mararka qaarkood ku dhacda maraakiibta dalxiiska. Waxaad eegi kartaa maqaalka oo dhan Halkan, laakiin hadda waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo fikradaha kale ee aasaasiga ah si looga fogaado raaxo -xumada mindhicirka.
Si fiican u dhaq gacmahaaga cuntada ka hor iyo dhowr jeer maalintii. Haddii aad sidoo kale doonaysid inaad qaadatid jel jeermiska dila, markaa hore u soco. Xor ayaad u tahay inaad shaqaalaha weydiisato inay nadiifiyaan miiska jimicsiga, kursiga, ama mashiinka aad u malaynayso inuusan ku jirin qaab wanaagsan.
Haddii aad aragto qof xanuunsan, calool xanuun leh, ama qandho, isku day ogow waxay cuneen ama cabbeen. By habka, gua on maraakiibta dalxiiska waa dhalo, ee ku kalsoonow iyada. Markay timaaddo cuntooyinka qalaad ama cabitaannada ee aadan isku dayin, waxaan kugula talineynaa inaadan ku cunin tiro aad u badan.
Waxaa jira dad u socdaalaya, beddelo cuntada iyo caadooyinka, waxay u keentaa raaxo -darro markay musqusha tagayaan. Isku day inaad tan kaga hortagto sidoo kale cunto leh fiber-sare. Ha dayacin.
Waxaan rajaynaynaa in talooyinkan aad kaga fogaato inaad ku xanuunsato fasaxaaga oo aad ku raaxaysato doonidaada boqolkiiba boqol.
Wadada buuxda ee maqaalka: Maraakiibta Absolut » General » Talooyin » Talooyin ku saabsan inaanad ku xanuunsan markab safar oo aad ugu raaxaysato si buuxda
Waxa Ay Tahay Inaad Ka Ogaato Xeerarka Degdegga Ah Ee Maraakiibta
Ma jiraa daboolis si loogu isticmaalo moobaylka markab safar?